News Archives - Myanmar Sports Villages
ဇာဗီ နှင့် သွားရောက်ပူးပေါင်းဖို့ များနေသည့် ကာဇိုလာ နှင့် နောက်ဆုံးရ ညနေပိုင်း သတင်းတိုများ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနှင့် ရာသီအကုန်တွင် လမ်းခွဲတော့မည့် ဘရာဇီးလ်တောင်ပံကစားသမား ဝီလီယံကို ခေါ်ယူဖို့ ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အေဂျက်စ်အသင်းဟာ စပါးစ်အသင်း၏ နောက်ခံလူ ဗာတွန်ဂန်ကို ခေါ်ယူဖို့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူကို ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်သော်လည်း အဆင်မပြေတာကြောင့် ပယ်ချလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အေဂျက်စ်ဒါရိုက်တာ အိုဗာမာစ့်က ပြောပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဟောင်း မစ်ဒယ်ဘရော့အသင်းဟာ ဂျိုနသန်ဝုဒ်ဂိတ်ကို ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက် QPR နည်းပြဟောင်း နေးလ်ဝါးနော့ခ်ကို အစားထိုးခန့်အပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိသည့် အူဘာမီယန်း၏နေရာကို အစားထိုးဖို့အတွက် ဆဲလ်တစ်တိုက်စစ်မှူး အက်ဒွပ်ကို တဖန်ပြန်ပြီး စိတ်ဝင်လာခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းကစားသမားဟောင်း ဇာဗီ ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည့် အယ်ဆတ်အသင်းဟာ ဗီလာရီးရဲလ်အသင်း၏ ဝါရင့်ကွင်းလယ်လူ ဆန်တီကာဇိုလာကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေကြောင်း သိရပါတယ်။ Sports Village
အီတလီမြေကို အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်လူ နှင့် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း နောက်ဆုံးရ သတင်းတိုများ
အဲဗာတန်အသင်းမှာ ကစားလျက်ရှိသော ဝါရင့် ဂိုးသမားကြီး စတယ်ကလန်ဘတ်ဟာ ယခုရာသီအဆုံးသတ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အသင်းဟောင်း အေဂျက်စ်ကို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆောင်းရာသီက စပါးစ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၂၆ သန်းဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် နယ်သာလန်ကစာသမား ဘတ်ချ်ဝင်းဟာ နည်းပြမော်ရင်ဟိုရဲ့ ဦးစားပေးပစ်မှတ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း မော်ရင်ဟိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စူပါအေးဂျင့် ရိုင်အိုလာဟာ မီခီတာရမ် နှင့် ဂျက်စတင် ကလွိုက်ဗက်တို့ လဲလှယ်မည့်ကိစ္စကို ကြိုးစားပမ်းစားဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ရိုးမားအသင်းက အဆိုပါကိစ္စကို ငြင်းပယ်ဖို့များနေကြောင်း အီတလီသတင်းစာတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကလွိုက်ဗက်ဟာ မီခီတာရမ်ထက် အသက်ပိုငယ်သည့်အပြင် တက်လမ်းရှိသည့် ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ရိုးမားအနေဖြင့် လွယ်လွယ်ဖြင့် လက်မလွှတ်လိုသောကြောင့်ပါ။ အာဂျင်တီးနားကလပ် Estudiantes မှာ အဌားဖြင့် သွားရောက်ကစားလျက်ရှိသော ရိုဂျိုအတွက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၁၂ သန်းသတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အတ္တလန်တာအသင်းဟာ ကွင်းလယ်၌ ခြေစွမ်းပြကစားလျက်ရှိသော ချယ်လ်ဆီးကစာသမား...
ကွန်ပနီနေရာအစားထိုးဖို့အတွက် ဟန်ပြင်နေသည့် မန်စီးတီးနှင့် နောက်ဆုံးရ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတိုများ
စပါးစ်အသင်းဟာ ဝါရင့်နောက်ခံလူ ဗာတွန်ဂန် နှင့် ဂိုးသမား ဗွန်းတို့ကို ရာသီကုန်သည်အထိ ကာလတိုသက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့၏ အော်ဖစ်ရှယ်ဝက်ဆိုက်ဒ်မှ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာကို ဥက္ကဌ ဘာတိုမြူက ၎င်းတို့အနေဖြင့် တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီယို ဂရစ်ဇ်မန်းနဲ့ ပတ်သတ်သည့် မည်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးကို မဆို လက်ခံစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရိုးမားအနေဖြင့် အသင်း၌ခြေစွမ်းပြလျက်ရှိသော ယူနိုက်တက်ကစားသမား စမော့လင်းကို ရာသီအကုန်မှာ အပြီးသတ်ခေါ်ယူသင့်သည်ဟု ဂန္ဓဝင်ကစားသမားကြီး ကာဘိုနီက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ စမော့လင်းဟာ ရိုးမားအသင်းနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျစွာ ကစားနိုင်သော်လည်း ရာသီအကုန်မှာတော့ မိခင်ကလပ်ကို ပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဗာတန်ကွင်းလယ်လူ ရှနိုက်ဒါလင်ဟာ ပြင်သစ်ကလပ် နိုက်စ်အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သလို၊ ယနေ့မှာပင်ဆေးစစ်မှုခံယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ စာချုပ်စာတမ်းအပြီးသတ်ဖို့အတွက် အဲဗာတန်အသင်းကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြောင်း နိုက်စ်အားကစားဒါရိုက်တာ ဂျူနီယာဖိုးနီယာက ပြောပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ဝုဗ်ဗာဟန်တန်အသင်း၏ တိုက်စစ်မှူး ရာအူးလ်ဂျီမီနက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် နောက်ခံလူ ရူဂါနီ နှင့်...
မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာပင် လီဗာပူးလ်၏ သမိုင်းတစ်လျှောက် လစာအများဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့မည့် #ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်
လီဗာပူးလ်ဟာ အသင်းရဲ့ အဓိကနောက်ခံတံတိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့ ကျောနံပတ် ၄ ပိုင်ရှင် ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ကို တပတ်လျှင် လုပ်ခလစာ ၂၂၀၀၀၀ အထိ တိုးပေးပြီး ၅ နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ လစာအတိုင်း ခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါက ဗန်ဒိုက်ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ လစာပေးချေမှုသမိုင်းမှာ အများဆုံးရရှိမည့် ပထမဦးဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီသတင်းကိုတော့ The Sun ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး PSG အသင်းက ဗန်ဒိုက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသည့်အတွက်ကြောင့် လျှင်လျှင်မြန်မြန် သက်တမ်းတိုးကိစ္စကို ဆောင်ရွက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်အရ ဗန်ဒိုက်ဟာ တပတ်ကို ပေါင် ၁၈၀၀၀၀ အထိ ရရှိနေပေမယ့် PSG အသင်းကတော့ ၎င်းကို တပတ်လျှင် ပေါင် ၂၈၀၀၀၀ အထိပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ လက်ရှိ လစာပေးစကေးလ်အရ လစာအများဆုံးခံစားခွင့်ရရှိထားသည့် ကစားသမားမှာ တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက်ဆာလတ်ချ်ဖြစ်ပြီး တပတ်လျှင်...
မာတီနက်ဇ်ကို မက်ဆီနဲ့ တွဲကစားဖို့ ထောက်ခံပေးခဲ့တဲ့ စကာလိုနီနှင့် နေ့လည်ပိုင်း သတင်းတိုများ
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှ အာဆင်နယ်အသင်းသို့ အဌားဖြင့်လာရောက်ကစားနေသော စပိန်ကွင်းလယ်လူ ဒန်နီစီဘယ်လော့စ်က ရာသီအကုန်မှာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်သို့ ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီး မက်ဒရစ်မှာ အောင်မြင်မှုရအောင် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြုံးဝါးခဲ့ပါတယ်။ လူချင်းခွာစည်းမျဉ်း (Social Distancing) ကိုချိုးဖောက်ပြီး မိသားစုနှင့်အတူ ကမ်းခြေသို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခဲ့သည့် စီးတီးကစားသမား ဖီးလ်ဖိုလ်ဒင်ကို မကြာခင်အချိန်အတွင်း အသင်းမှ အပြစ်ပေးအရေးယူသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဂန္ဓဝင်ကစားသမားကြီး ရော်ဘတ်ပီးရက်စ်က အနာဂတ်မှာ နည်းပြချုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းထားကြောင်း မော်ရိုကိုသတင်းထောက် ဇီနက်ဘ်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်၏ ပစ်မှတ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျက်ဂရီးလစ်ရှ်က Lock down ကာလအတွင်း အပြင်ထွက်ကာ စည်းကမ်းချိုးဖောက်ခဲ့သည်အတွက် တရားဝင်ပြန်လည်တောင်းပန်သွားခဲ့ပြီး ရင့်ကျက်မှုအားနည်းသေးတယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသူ (၅) ဦးအထိရှိခဲ့သော်လည်း အဆိုပါကူးစက်ခံရသည့် ကစားသမားများ၏အမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားချင်းမရှိသလို၊ လာလီဂါဘက်ကလည်း တုံ့ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ ဖုံးဝှက်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အူဘာမီယန်းကို သူတို့လိုချင်တဲ့ ဈေးတစ်ခုမရမချင်း...
အူဘာမီယန်းကို သက်တမ်းတိုးဖို့ အခက်တွေ့နေသည့် အာဆင်နယ် နှင့် နေ့လည်ပိုင်း နောက်ဆုံးရ ဘောလုံးသတင်းတိုများ
နယူးကာဆယ်အသင်းဟာ စပါးစ်အသင်းမှ အဌားဖြင့် ခေါ်ယူထားသည့် အင်္ဂလန်ကစားသမား နောက်ခံလူ ဒန်နီရို့စ်ကို အဌားစာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့အတွက် ညှိ့နှိုင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ (Sky Sports) ဆောက်သမ်တန်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ နည်းပြကြီး ရက်ပ်ဟန်ဆန်ဟဲတယ်လ်ကို ယမန်နေ့ကပဲ ၄ နှစ် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ဆန်ဟဲတယ်လ်ဟာ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ယခင်နည်းပြဟောင်း မတ်ဟုချ်ရဲ့ နေရာကို ဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသင်းကို တန်းဆင်းဇုံမှ လွတ်မြောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနှင့် ရာသီအကုန်မှာ လမ်းခွဲတော့မည့် ဝါရင့်တောင်ပံကစားသမား ဝီလီယံကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှ အလွတ်ဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ပယ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ လူငယ်ကစားသမားများဖြစ်သည့် ဟယ်ရီဝီလ်ဆင်နှင့် ဘရူစတားတို့ကို အဌားစာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဟယ်ရီဝီလ်ဆင်ဟာ ဘုန်းမောက်အသင်းမှာ အဌားဖြင့်သွားရောက်ကစားနေပြီး၊ ဘရူးစတားကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းဟောင်း ဆွမ်ဆီးအသင်းမှာ သွားရောက်ကစားလျက်ရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်ကစားသမား ဒမ်ဘီလီဟာ သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေတိုးတက်သက်သာလာစေဖို့အတွက် ဒူဘိုင်းမှာ သွားရောက်၍...
ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူကို ခေါ်ယူဖို့ အခွင့်ရေးရှိခဲ့ပေမယ့် လက်လွှတ်ခဲ့တဲ့ အာဆင်ဝင်းဂါး
အာဆင်နယ်နည်းပြဟောင်း အာဆင်ဝင်းဂါးဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အသင်းခေါင်းဆောင် ဖာဘရီဂတ်စ်ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း အစားထိုးဖို့အတွက် အသင်းမှ ကင်းထောက်များကို နေရာတော်တော်များစေလွှတ်၍ ကစားသမားများကို စောင့်ကြည့်စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဖာဘရီဂတ်စ်ဟာ ထိုစဉ်အချိန်က အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် အရေးပါသည့် ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ အသင်းခေါင်းဆောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်တာကြောင့် ၎င်းနေရာ၌ ဗလင်စီယာမှာ ကစားလျက်ရှိသော စပိန်ကစားသမား မာတာကို အစားထိုးဖို့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ကင်းထောက်ချုပ်ဟောင်း ဖရန်စစ် ကာဂီဂါအိုက အာဆင်ဝင်းဂါးထံ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကာဂီဂါအိုဟာ အာဆင်ဝင်းဂါးကို မာတာနှင့်အတူ နေ့လည်စာစားဖို့ အကြံပြုခဲ့သော်လည်း အာဆင်ဝင်းဂါးက မာတာထက် ဗီလာရီးရဲလ်မှာ ကစားနေသော စပိန်ကွင်းလယ်လူ ကာဇိုလာကို ပိုပြီး သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ငွေကြေးစိစစ်လွန်းတာကြောင့် မာတာရော၊ ကာဇိုလာပါ လုံးဝခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ “အာဆင်နယ်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ စိတ်ကူးကတော့ ကစားသမားတွေကို အစားထိုးတဲ့နေရာမှာ သူ့နေရာနဲ့သူ ဒဲ့ပဲ အစားထိုးချင်တာပါ။ ပြီးတော့ အမြတ်စွန်း ပြန်ပေါ်ဖို့လည်း...
တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာဖို့ရှိနေသည့် FA ဖလား ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်များ…….
FA ဖလားပြိုင်ပွဲ ပဉ္စမအဆင့်ပွဲစဉ်များပြီးဆုံးဖို့အတွက် ဒါဘီ Vs မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ပွဲတစ်ပွဲသာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်။ ၎င်းအဆင့်မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှ အသင်းကြီးအများစုဖြစ်သည့် ချယ်လ်ဆီး၊ မန်စီးတီး၊ အာဆင်နယ်၊ နယူးကာဆယ် နှင့် လက်စတာစီးတီးအသင်းများဟာ နိုင်ပွဲများအသီးသီးရှာတွေ့ကာ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်လှမ်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသာ ကျန်ပေမယ့် FAကတော့ နောက်တဆင့်ပွဲစဉ်များကိုရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရေးဆွဲထားသည့် ပွဲစဉ်ဇယားအရ လီဗာပူးလ်ကို အနိုင်ရခဲ့သည့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ တဖက်က ဘာမင်ဂမ်ကို အနိုင်ရပြီး တက်လာခဲ့သည့် လက်စတာစီးတီးအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပို့စ်မောက်အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့သည့် အာဆင်နယ်အသင်းက ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကို အဝေးကွင်း၌လည်းကောင်း၊ ရှက်ဖီးဝင်းစဒေးလ်အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့သည့် မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းက နယူးကာဆယ် ကို အဝေးကွင်း၌ လည်းကောင်းအသီးသီးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယမန်နေ့ညက စပါးစ်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ဖြင့်အနိုင်ရကာ တက်ရောက်ခဲ့သည့် နောဝစ်ချ်စီးတီးအသင်းဟာ ဒါဘီ Vs မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ ပွဲမှ အနိုင်ရသည့်အသင်းကို...
အက်ဖ်အေဖလား ပဉ္စမအဆင့်ရဲ့ ချယ်ဆီး (၂-ဝ) လီဗာပူးပွဲစဉ်မှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် အချက်အလက်များ
(၂၀၁၉-၂၀)အက်ဖ်အေဖလားပြိုင်ပွဲ ပဉ္စမအဆင့်ပွဲစဉ်တွေမှ အသင်းကြီးအချင်းချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲစဉ်အဖြစ် ချယ်ဆီးနဲ့ လီဗာပူးတို့အားပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ ချယ်ဆီးအသင်းအိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ချယ်ဆီးနဲ့ လီဗာပူးအသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ ဒဏ်ရာရရှိနေခဲ့တဲ့ ချယ်ဆီးဘက်က အေဗရာဟင်မပါဝင်ခဲ့တာကလွဲရင် လူစုံခဲ့ပြီး ဂိုးသမား ကီပါလည်းပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးကတော့ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အဓိက ကစားသမားအဖြစ် မာနေးကိုသာထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပြီး အော်ရီဂီ၊ မီနာမီနိုတို့တိုက်စစ်အတွဲနဲ့ ချယ်ဆီးကိုအဝေးကွင်းမှာရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ သူတို့ရဲ့ကစားဟန်အတိုင်းချယ်ဆီးဘက်ကိုတိုက်စစ်ဆင်ကစားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်ချယ်ဆီးဘက်ကလည်း လျင်မြန်တဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကစားဟန်နဲ့ လီဗာပူးဘက်ကို ပြန်လည်ဖိအားပေးခဲ့ပြီး ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်(၁)ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချယ်ဆီးအတွက် သွင်းဂိုးတွေကိုတော့ ဝီလီယံ၊ ဘာကလေတို့သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး (၂)ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိကာ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းကတော့ ဒီပွဲစဉ်အရေးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ဖလား(၁)လုံးလမ်းကြောင်းပေါ်က သွေဖယ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲတို့မှာသာ ပိုမိုအာရုံစိုက်ကစားသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ဆီးနဲ့ လီဗာပူးအသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့ အောက်ပါစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် အချက်အလက်များ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ * ချယ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ ယခုနှစ်ရာသီရဲ့ အက်ဖ်အေဖလားကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဟာ နောက်ဆုံး(၅)ရာသီမှာ (၄)ကြိမ်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၂၀၁၈)ခုနှစ်က ဗိုလ်လုပွဲထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာရာမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို (၁)ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။...
Breaking News : ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးခဲ့သည့် တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီးမား
AS သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ဟာ အသင်းရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကာရင်ဘန်ဇီးမားကို တစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါစာချုပ်သစ်အရ ဘန်ဇီးမားဟာ မက်ဒရစ်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ ဆက်ရှိနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်စာချုပ်ဟောင်းအရ ဘန်ဇီးမားဟာ လာမည့်ရာသီအကုန်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်သော်လည်း ယခုရာသီမှာ ခြေစွမ်းပြနေသည့်အတွက်ကြောင့် ကလပ်အသင်းဘက်မှ စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၃၂) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ဘန်ဇီးမားဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို (၃၅) သန်းဖြင့် လိုင်ယွန်အသင်းမှ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်အတူ (၁၁) ရာသီ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက် ဘန်ဇီးမားဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ စုစုပေါင်း (၄၉၇) ပွဲကစားခွင့်ရရှိထားပြီး သွင်းဂိုးပေါင်း (၂၄၀) ကိုသွင်းယူပေးထားပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှာတော့ ဘန်ဇီးမားရဲ့ အသက်ဟာ (၃၄) ပြည့်မည်ဖြစ်သလို၊ ကလပ်ဘက်မှလည်း ၎င်းနေရာကို ရေရှည်အစားထိုးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။...